10 Ndidi ahụ Esta nwere mechara baa ezigbo uru. Heman ji “ọṅụ na obi ụtọ” laa n’ụbọchị mbụ ahụ eze na nwunye ya kpọrọ ya oriri. Ma, ka Heman na-agafe n’ọnụ ụzọ ámá obí eze, ọ hụrụ Mọdekaị, bụ́ onye Juu na-anaghị ekwe akpọrọ ya isiala. Isiokwu bu nke a ụzọ kwuru na ihe mere Mọdekaị na-anaghị akpọrọ ya isiala abụghị na ọ chọghị ịkwanyere ya ùgwù, kama ọ bụ na ọ chọghị ihe ga-eme ka akọnuche ya pịawa ya ụtarị, ọ chọghịkwa ime ihe ga-ewe Jehova Chineke iwe. Ma, ‘ọnụma juru Heman obi ozugbo ahụ.’—Esta 5:9.
11 Mgbe Heman gwara nwunye ya na ndị enyi ya na Mọdekaị ekweghị akpọrọ ya isiala, ha gwara ya ka ọ rụọ nnukwu osisi dị mita iri abụọ na abụọ n’ogologo, gwakwa ya ka ọ gwa eze ka o nye ya ikike ka ọ kwụgbuo Mọdekaị n’elu ya. Ihe a ha gwara Heman dị ya mma, ya ekwuokwa ozugbo ka a rụọ osisi ahụ.—Esta 5:12-14.